पसल खुलेपछि बढ्यो चहलपहल — Arthatantra.com
Arthatantra.com > समाचार > पसल खुलेपछि बढ्यो चहलपहल
पर्सा । स्थानीय प्रशासनको अनुमतिले बजारमा रहेका पसल खुला भएपछि देशकै आर्थिक राजधानी वीरगञ्ज बजारमा सर्वसाधारणको चहलपहल बढेको छ ।
२०७७ जेष्ठ २५ गते ११:४३ मा प्रकाशित
पसल तथा व्यवसाय
अब कसले गर्दैछ ? ६००% हकप्रद निष्काशन ! पढ्नुहोस्
सेयर बजारका प्राविधिक शब्द नजानेर समस्यामा हुनुहुन्छ ? नेप्सेले ल्यायोे एजुकेशनल वेवसाईट
टयाङ्गग्रापूल मर्मत गर्न सडक डिभिजनको उदासिनतामा इटहरीका जनप्रतिनिधिको आक्रोस
यसरी हट्छ लोडसेडिङ : कृष्णहरि बाँस्कोटा